Gịnị bụ Magnesium L-threonate?
Magnesium L-threonate nke778571-57-6) pụtara dị ka ụdị ọgwụ magnesium kachasị emetụta n'ahịa taa. Magnesium bụ ihe ịnweta nkịtị nke nwere ike ịdị na nri dị iche iche ma dịkwa oke mkpa maka ahụike mmadụ dịka ọ na-eji ihe karịrị 600 cellular reactions na ahụ gị.
Edebere Magnesium L-threonate n'okpuru aha Magtein na ọ bụ naanị ọgwụ nke gosipụtara na ọ dị irè iji melite ogo magnesium na ụbụrụ. Akụ ahụ ọ bụla ma ọ bụ sel n’ahụ gị chọrọ ka magnesium rụọ ọrụ ya nke ọma. Nke a na-eme ka ịnweta ahụ ike, akwara, obi, na ịrụ ọrụ ụbụrụ nke ọma.
N'aka nke ọzọ, magnesium na-enyekwa aka n'ịgwọ nsogbu nke ụra. Enwere ọtụtụ ụdị magnesium na ahịa taa, gụnyere magnesium oxide, magnesium citrate, na magnesium chloride. A na-eji ụdị ndị a emeziwanye usoro ịnweta mineral na ahụ ma na-enyere aka n'ịkwalite mmemme sel na akụrụngwa.
The ozi ọma bụ na magnesium L-threonate ntụ ntụ dị ma n'ịntanetị ma n'ụlọ ahịa anụ ahụ gbara gị gburugburu. Agbanyeghị, gbaa mbọ hụ na ị ga - enweta ndenye ọgwụ sitere n’aka onye ọrụ ahụike maka nsonaazụ kacha mma.
Dika magnesium L-threonate bara uru n’arụ gị, ọ nwere ike ibute nsonaazụ dị njọ mgbe ejiri ya mee ihe ma ọ bụ ịdoụbiga ya ókè. Dịka mgbe ị na-ewere ọgwụ ndị ọzọ nootropic, na-emetụta dọkịta gị na usoro usoro ọgwụgwọ niile na-emesi gị obi ike na nsonaazụ mara mma.
Kedu ka Magnesium L-threonate -arụ ọrụ?
Nke mbụ, ọrụ magnesium L-threonate bụ iwelie ọkwa magnesium na ahụ gị ma nyere aka melite sel gị na akwara gị na-arụ ọrụ. Dịka anyị kwuru na mbụ, magnesium na arụ ọrụ dị mkpa iji nyere aka rụọ ọrụ sel gị dị mma.
A macnesium ịnweta dị na nri dị iche iche kwa ụbọchị ị na-ewere kwa ụbọchị. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ọkwa ịnweta nwere ike gbadata wee gbaa gị ọnọdụ ọnọdụ ahụike dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ọkwa magnesium dị ala nwere ike ibute nsogbu ọnọdụ obi, nkụda mmụọ, nchekasị, palpia obi, isi ọwụwa, na migraine. Ndị na-eme egwuregwu na-enwekwa nsogbu site na ngwanrọ na ntanetị ma ha enweghị magnesium zuru ezu na sistemu ahụ ha.
N'elu nri magnesium dị na nri gị, ọ bụrụ na mineral ezughi iji kwado ọrụ kwesịrị gị na akwara ọrụ gị, mgbe ahụ dọkịta gị nwere ike ịkọpụta Magnesium L-threonate. Ahụ mmadụ dị iche, yabụ, ọ bụghị mmadụ niile ga-enweta ụdị nsogbu ahụ mgbe ha na-arịa ụkọ magnesium. Agbanyeghị, Magnesium L-threonate egosila na ọ nwere ike mgbakwunye magnesium. Dabere na ọkwa magnesium gị dị ntakịrị, Magnesium L-threonate na-anapụta nnukwu uru mgbe ejiri ya nke ọma.
Ozugbo ị takeụrụ ọgwụ Magnesium L-threonate, ọgwụ ahụ ga-abanye n'ime ahụ gị ngwa ngwa wee malite ịrụ ọrụ ozugbo. Magnesium zuru ezu n'ahụ gị na-arụpụta nke ọma ịrụ ọrụ cognitive na ebe nchekwa, mee ka arụ ọrụ na akwara arụ ọrụ nke ọma yana ịkwalite akụkụ ahụ ndị ọzọ. N'ime afọ gị, mineral magnesium na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịmechi acid acid na ime ka ijeghari ahụ n'ime eriri afọ.
Wisepower bụ onye nrụpụta ihe nke Magnesium L-threonate raw material,
ikike mmepụta kwa ọnwa ruo 3,000KG.
Is Magnesium L-threonate ọ dị mma maka ụra?
Ee, magnesium L-threonate dị mma maka ihi ụra. Ọtụtụ ndị nwere nsogbu ma a bịa n'ịlata ụra dị mma, na ịkwụsị ọwụwa ụra nwere ike isi ezigbo ike. You nwere ike ịgbanwe usoro ihi ụra gị ma ọ bụ belata nri ịffeụ caffeine mana ị gaghị enweta nsonaazụ achọrọ. Agbanyeghị, ị supụ ọgwụ ndị dị ka Magnesium L-threonate nwere ike inyere gị aka ịra ezigbo ụra.
Mịnịstrị dịka magnesium nwere mmetụta dị iche iche na ahụ gị nke na-akwalite ihi ụra. Ya mere, magnesium enweghị nwere ike ibute ọnọdụ ahụike na-ebute ehighị ụra. Magnesium L-threonate, yabụ, ga-eme ka ahụ na arụ ọrụ cellular nke ga - emecha nyere gị aka ịrahụ ụra. N'ịkwalite ma magnesium ihi ụra na-arụ ọrụ ndị a n'ime ahụ gị;
(1). Nyere ahụ gị na ụbụrụ gị zuru ike
Maka inweta ụra dị mma, ụbụrụ gị na ahụ gị ga-ezu ike. Igwe magnesium zuru ezu na ahụ gị na-enyere aka mee ka uche gị na ahụ gị dị jụụ site na ị na-arụ ọrụ sistem parasympathetic ụjọ, nke bụ maka ime ka ahụ gị dị jụụ ma mee ka ahụ gị dajụọ. Magnesium na-achịkwa ndị neurotransmitters, ndị nwere ọrụ maka izipu akara n'etiti ụbụrụ gị na ahụ gị niile. N’aka nke ọzọ, ọ na-edozi oke melatonin nke na-ahụ maka ịduzi usoro ịtụgharị n’ụra.
Magnesium na - ejikọtara ndị na - anabata gamma-aminobutyric acid (GABA), nke bụ neurotransmitter nke na - eme ka ahụ kwụsị ọrụ ọrụ akwara. GABA bụ otu neurotransmitter eji rụọ ọrụ ọgwụ ụra dịka Ambien. Idopu akwara ozi na-akwadebe uche gị na ahụ gị ihi ụra.
(2). Ọrịa magnesium na-egbochi ụra
Naanị enweghị ịnweta magnesium zuru oke na sistemụ ahụ gị na - eduga nsogbu ụra ma ọ bụ ehighị ụra nke ọma. Ya mere, Magnesium L-threonate dị oké mkpa iji melite ọkwa ịnweta n'ime ahụ gị iji mee ka ị nwee ezigbo ụra. Nnyocha ahụike na-egosi na ogo magnesium kachasị mma dị mkpa maka ihi ụra nkịtị. Agbanyeghị, ma ọkwa magnesium dị elu ma dị ala nwere ike ibute nsogbu ihi ụra, ọ bụ ya mere ọ ga - eji dị mma ịga maka nyocha ahụike tupu ịmalite ịmalite magnesium L-threonate usoro ogwu.
Ihe dị iche iche na ọnọdụ ahụike nwere ike ibute nri magnesium. Iji maa atụ, ọrịa diges na-emetụta ụgbụ nri gị nwere ike ime ka o siere ahụ gị ike ịnweta mineral na vitamin nke ọma, na-eduga na adịghị ike magnesium. A na-ejikọkwa ọrịa shuga na mgbochi insulin na ọnwụ magnesium dị ukwuu.
Ọgbọ bụkwa ihe dị ka ndị okenye meworo agadi na-eri nri na magnesium dị obere karịa ndị okenye. Nke ahụ pụtara na ndị okenye toro eto nọ n'ihe egwu dị elu na-ata ahụhụ site na mgbaàmà ọrịa magnesium dịka nsogbu ụra. Ndị na-a alcoholụ mmanya na-egbu egbu nwekwara ike inwe ụkọ ịnweta. Magnesium zuru ezu pụtara na ị ga-enwe ezigbo ụra, ọ bụ ebe Magnesium L-threonate na-abịa n'aka.
(3). Na-achịkwa ogo ụra
Magnesium na - enyere gị aka inweta izu ike na ụra miri emi. Mmetụta mineral na sistemụ ahụ na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịrahụ ụra abalị nke ịdị mma. Magnesium na - egbochi irighiri akwara ndị nwere njikọ n'ahụ ya, si otú ahụ mee ka usoro ụjọ ahụ dajụọ, nke a na-akpata ụra dị mma. Nnyocha dịgasị iche iche egosiwo na magnesium dị mkpa n'ịkwalite ụra. Ugbu a, ọmụmụ omumu egosiputala mmetụta magnesium n’idozi nsogbu ụra n’etiti ndị okenye toro eto.
Brain restanda impact nke Magnesium L-Threonate
Magnesium L-threonate bụ nke amachibidoro mgbe ọhụụ nke ikike ya iji melite ogo magnesium na ụbụrụ. A na-etinye ọgwụ a ngwa ngwa n'ime sistemụ ahụ ma banye n'uche iji mee ka magnesium gbanwee ụbụrụ nke ịka nká nke ụbụrụ dị ka nsogbu mwepụ anya (ADHD). Nke a ADHD na-amalite nwayọ nwayọ n'ime afọ, ọ nwere ike isi ike ịchọpụta ya na mbido mbụ ya, mana a na-ejikọta ọnọdụ ahụ na mbelata nke ọgụgụ isi.
Ndị okenye na-eri nri na-enweghị nri magnesium, nke na-akọwa ihe kpatara enweghị magnesium ji bụrụ ihe a na-ahụkarị n'etiti ha. E nwekwara ọnọdụ ahụ ike ndị ọzọ dịka nsogbu digestive na ọrịa shuga na-ebelata magnesium n’ahụ. Magnesium na-eme ka ikike ọrụ nke akwara dị iche iche, akwara akwara dị iche iche, na akụkụ ahụ dị iche iche na-arụ ọrụ.
Magnesium ezughị ezu na ụbụrụ na-eduga ná nsogbu ndị dị ka nsogbu ihi ụra, nchekasị, obi nkoropụ, ọ na-emetụtakwa icheta ọrụ na ọgụgụ isi. Agbanyeghị, nsonaazụ ahụ nwere ike ịdị iche site n'otu onye gaa na onye ọzọ, mana magnesium L-threonate nwere ike dozie ha site n'ịbawanye ọkwa nke mineral na ụbụrụ gị.
Nnyocha ọmụmụ ahụike dị iche iche na ule egosiwo ike magnesium L-threonate nwere ike ịgbanwe usoro ịka nká nke ụbụrụ. Nchọpụta nke pụtara ìhè bụ mgbe a chọpụtara na Magnesium L-threonate nwere ike gbanwee ihe karịrị afọ itoolu nke ụbụrụ ịka nká. Ọgwụ a na - eme ka njupụta nke synapses, nke bụ njikọ nkwukọrịta dị n'etiti sel ụbụrụ gị - nkwụsị nke njupụta synaptic na-ebute nsonaazụ uche na ụbụrụ ịda mbà.
Nchoputa emere gosiri na izu iri-na-abuo Magnesium L-threonate na-eme ka ikike ọgụgụ isi rụọ ọrụ ma na-agbanwe ịka ụbụrụ. Dị ka ọ na -eme, ụbụrụ na-adalata ka ị na-akawanye afọ n'ihi ọdịda nke ọnụọgụ na ọrụ ụbụrụ akwara na mkpọchi akụkụ ụbụrụ ha, nke a na-akpọ synapses.
Ọnwụ nke synapses bụ ihe bụ isi kpatara ọdịda uche. Ya mere, ikike Magnesium L-threonate iji bulie njupụta synapses na-eme ka ọ bụrụ ebe nchekwa kachasị mma na mmelite mmetụ kachasị mma na ahịa taa. Ozugbo ogo magnesium dị n'ụbụrụ gị zuru ezu, ị ga-ejide n'aka na ị gbanwee nsogbu ịka nká nke ụbụrụ. Nyocha ahụike tupu, n'oge, na mgbe usoro ọgwụgwọ gachara ga-adị mkpa iji nyochaa ọganihu ọgwụ.
Kedu ihe ọzọ uru nke magnesium L-threonate?
Ahụike ụbụrụ na ịkwalite ịdị mma nke ụra abụghị naanị uru ị ga-enweta maka ị Magụ Magnesium L-threonate. Ọgwụ a na-arụ ọrụ dị mkpa iji melite ike ọrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sel na akụkụ ahụ gị niile. Magnesium bụ mineral dị mkpa nke ahụ gị kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma. Nke a bụ ụfọdụ n'ime ndị ọzọ Magnesium L-threonate uru;
(1). Belata ressionda Mbibi na Nchegbu
Ọnọdụ abụọ a bụ ihe ọtụtụ ndị na-eme ugbu a, ọtụtụ ihe kpatara ha. Agbanyeghị, magnesium egosila ike ya ịchịkwa ma belata ịda mba na nchegbu. Nke kachasị, ọnọdụ uche abụọ a nwere ụkọ magnesium. Yabụ, ọ bụrụ na ezughi oke mmanụ a n’ụbụrụ gị, o nwere ike ịda mba n’obi na nchekasị.
Ikike Magnesium iji mee ka usoro ụjọ ahụ dị jụụ na-enyere aka n'ibelata nsogbu ọnọdụ uche abụọ. Ekwesịrị iwere nchegbu magnesium L-threonate n'okpuru ntuziaka dọkịta maka nsonaazụ kacha mma.
(2). Na-akwalite ọkpụkpụ na akwara ike
Magnesium ụkọ na-eduga n'ọkpụkpụ ụkwụ na ọkpụkpụ na-esighi ike, ọkachasị n'oge agadi. Magnesium L-threonate nwekwara ike ịgwọ ọrịa osteoporosis nke bụ ọnọdụ nkịtị maka ndị okenye agadi. N'aka nke ọzọ, ndị na-eme egwuregwu na-a thisụ ọgwụ a iji nyere ha aka na mgbake nke uru ahụ mgbe arụ ọrụ yana maka nrụpụta aerobic na anaerobic.
Uru nke magnesium L-threonate dị ọtụtụ, a na-ejikwa ọgwụ ahụ maka ọgwụgwọ ọnọdụ ahụike dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe iji belata ihe mgbu mgbe hysterectomy, ịwa ahụ, na mgbu obi na-akpata site na akwara akwara. Magnesium L-threonate na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịgwọ ọrịa ịnụ ntị, ọrịa shuga, fibromyalgia, na iwetulata kọleji n'ọtụtụ ọnọdụ ahụike ndị ọzọ.
Ego ole Magnesium L-threonate ka m kwesịrị iwere?
Magnesium L-threonate bụ ogwu anwuru n’onu. Ọgwụ dị n'ụdị mbadamba na ntụ ntụ. Otú ọ dị, magnesium L-threonate usoro onunu ogwu dabere na onye ọrụ ya na ọnọdụ ọ bụla ọgwụgwọ. Dọkịta gị ga-akacha mma iji tọọ gị ọgwụ gị. Ọ bụ ezie na ebe ahụ ndị na-emepụta ọgwụ na-atụ aro maka ịsụ ọgwụ oge niile na-aga nyocha ahụike dị ka usoro ahụ mmadụ si dị iche.
Ngwadogwu L-threonate magnesium a tụrụ aro maka afọ 19-30 bụ 400mg (ụmụ nwoke) na 310mg kwa ụbọchị maka ụmụ nwanyị. Maka afọ iri atọ na otu na okenye ga-ewere 31mg na ụmụ nwanyị 420mg kwa ụbọchị. Onyinye ego a na-atụ aro maka ụmụ nwanyị dị ime n'etiti afọ 320 ruo 14 bụ 18mg, ebe ndị si na 400-19 bụ 30mg na afọ 350-31 bụ 50mg.
Womenmụ nwanyị na-edina nwanyị nwekwara ike ị drugụ ọgwụ a dịka nke a; Afọ 14-18 afọ 360mg kwa ụbọchị, afọ 19-30 tụrụ aro ọgwụ bụ 310mg ebe afọ 31-50 ka onwa ahụ dị 320mg. Ihe a na-ahụ magnesium L-threonate kwa ụbọchị ka onye ọ bụla dị afọ asatọ gbagote bụ 350mg, nke ahụ gụnyere ma ndị na-enye nwa na ụmụ nwanyị dị ime.
A na-eji magnesium L-threonate mee ihe na ọgwụgwọ nke ọnọdụ ahụike dị iche iche, usoro ị doụ ọgwụ ahụ dịkwa iche site n'otu onye ọrụ gaa na nke ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, na afọ mgbu (dyspepsia), usoro ọgwụgwọ akwadoro sitere na 400-1200mg kwesịrị ka ekewa ya ruo ugboro anọ kwa ụbọchị.
Maka uru ọgụgụ isi kachasị mma, ọgwụ a tụrụ aro bụ 1000mg ka a ga-ewere ya ugboro abụọ kwa ụbọchị. Mgbe ị na-ewere Magnesium L-threonate maka nsogbu ihi ụra, usoro ziri ezi dị n'etiti 400-420mg kwa ụbọchị maka ụmụ nwoke na 310-360mg maka ụmụ nwanyị. Na ihe niile, Magnesium L-threonate (778571-57-6) onunu ogwu di iche site na onye oru ozo; ya mere, gbaa mbọ hụ na ị nwetara ọgwụ ziri ezi n'aka ọgwụ gị.
Wnri okpu dị elu Magnesium L-threonate?
Ewezuga iwere Magnesium L-threonate iji mee ka ogo magnesium dị n'ụbụrụ gị, ị nwekwara ike iri nri nke ọgaranya na mineral ndị a. Ihe oriri ndị a nwere ike inyere gị aka inweta ọkwa magnesium dị gị mkpa ma nwee ọ mineralụ uru niile ị na-enweta. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime nri kachasị elu na Magnesium L-threonate;
ọchịchịrị Chocolate- otu o si atọ ụtọ ma sie ike, ọ na-eburu 64mg nke magnesium nke bụ 16% nke RDI. Ewezuga nke ahụ, chocolate gbara ọchịchịrị nwekwara akụrụngwa ọla, iron, na manganese yana prebiotic fiber.
avocados- mkpụrụ osisi a na - atọ ụtọ ma na - edozi ahụ nwere ike inye gị 58mg nke magnesium nke bụ ihe dịka 15% nke RDI. Mkpụrụ osisi bara ụba na vitamin B, K, yana nnukwu mmiri nke potassium.
Nutsare- makwaara dị ka otu n'ime ezigbo Magnesium L-threonate sitere n'okike. 1-ounce na-eje ozi cashews nwere 82mg magnesium nke bụ 20% nke RDI.
Legumessuch- dị ka peas, lentil, chickpeas na agwa soya bara ụba na mineral dị iche iche, gụnyere magnesium. Iji maa atụ, otu iko agwa agwa dị 120mg nke magnesium, na nke ahụ bụ 30% nke RDI.
E nwekwara nri ndị ọzọ dị ka Tofu, mkpụrụ chia, mkpụrụ ugu, azụ̀ nwere ọdụdụ, iji kpọtụrụ ole na ole. Gakwuru onye na-ahụ maka nri gị maka ihe ndị ọzọ gbasara nri magnesium a.
ịzụta magnesium L-threonate n'ịntanetị
Magnesium L-threonate ntụ ntụ bụ ọgwụ na-enweta ngwa ngwa ma na ụlọ ahịa anụ ahụ na n'ịntanetị. Nwere ike ịzụta ọgwụ a site na nkasi obi nke ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ gị wee chere maka nnyefe nke onye na-azụ ahịa a pụrụ ịdabere na ya ga-eme n'oge kachasị dị mkpirikpi.
Gwa dọkịta gị ka o duzie gị ka ị nweta ezigbo Magnesium L-threonate na site n'aka onye ahịa ma ama ama na ọkaibe. Onlinentanetị dị iche Depo Nootropics chekwaa ọgwụ a tinyere Walmart, Amazon, na vitamin Magnesium L-threonate.
E nwekwara ndị ọzọ na-ere ntanetị ma na-eme nyocha gị mgbe niile iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere onye ọ bụla na-ere Nootropic tupu ị nye iwu gị. Buyingzụ ahịa Magnesium L-threonate kwesịrị iji nlezianya mee ka ị na-ewere obere ogo, ma ọ bụ ọgwụ adịgboroja nwere ike kpughere gị na mmetụta ụfọdụ siri ike.
Guo nyocha Nootropics ka ịmatakwu banyere ndị na-ere ịntanetị Magnesium L-threonate gafee ụwa. Ka ọ dị ugbu a, Magnesium L-threonate amazon na Magnesium L-threonate Walmart bụ ndị kachasị ewu ewu Nootropic. Storeslọ ahịa dị n'ịntanetị bụ nke kachasị mma ka ha na-enye gị ohere ịzụ ahịa maka iche iche Nootropic Mmeju site na ekwentị gị, laptọọpụ, ma ọ bụ mbadamba. Legodị afọ ole ngwaahịa ga-ewe ka ibuga gị na ọnọdụ gị wee họrọ azụmahịa kacha mma maka gị.
Magnesium bụ ihe dị mkpa ịnweta maka ịkwalite ọrụ ọgụgụ isi, meziwanye ụra, yana belata mgbaàmà nke ịka nká nke ụbụrụ yana ịkwalite sel ahụ na akụkụ na-arụ ọrụ. Enwere dị iche magnesium, site na ọgwụ ruo na nri ndị sitere n'okike. Enweghị magnesium na-ekpughe ndị mmadụ na ọnọdụ ahụike dị iche iche dịka ADHD. Otú ọ dị, mmepe nke Magnesium L-threonate ADHD bụ ozi ọma maka ndị nwere obere ogo magnesium dịka ọ gosipụtara na ọ bụ ọgwụ dị ike maka mgbaàmà erughị eru ịnweta. A na-ejikwa ọgwụ ahụ maka ọgwụgwọ ndị ọzọ dị ka inyeaka ihe mgbu mgbe a wachara ya ahụ na ịkwalite ọkpụkpụ na ahụ ike.
Ilele nyocha dị iche iche nke magnesium L-threonate, ị nwere ike ikikere ikwu na ọ bụ n'etiti isi iyi magnesium kachasị. Magnesium L-threonate bụ ọgwụ iwu, mana ịkwesịrị ị were ya n'okpuru ọgwụ dọkịta maka nsonaazụ ka mma. Ọgwụ ahụ dị na ụlọ ahịa anụ ahụ na nke ịntanetị. Ekwekwala ka ihe onyonyo a laa elu ma ọ bụ n ’ala n’agwaghị dọkịta gị. Bụrụ na nsonaazụ ọ bụla nwere ike ịkpọtụrụ ọgwụ gị ozugbo. Maka ama ndi ozo banyere magnesium L-threonate na ndi ozo nootropics ịzụta, gakwuru ndị ọkachamara ọgwụ.
Anyanwụ, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Iwu nke usoro synapse nke L-threonate site na mgbanwe nke ntinye nke magnesium intraneuronal. Neuropharmacology, 108, 426-439.
Mazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., & Halili, J. (2017). Ọrụ nke Catalase (CAT), ALT na AST na Organs dị iche iche nke Switzerland Albino Mice Na-emeso Lead Acetate, Vitamin C na Magnesium-L-Threonate. Akwụkwọ akụkọ Clinical & Diagnostic Research, 11(11).
Mickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013). Ogologo oge magnesium-L-threonate na-eri nri na-agba ọsọ ọsọ ma na-ebelata mgbake nke ntụgharị ihu igwe. Usoro ọgwụ na ọgwụ nje na ọgwụ, 106, 16-26.
Abumaria, N., Luo, L., Ahn, M., & Liu, G. (2013). Mmezi nke Magnesium na - eme ka nkewa gbasara onodu gbasara ohere gbasara ohere - ma me ka uju gbochie. Omume ọgwụ, 24(4), 255-263.
1.Gịnị bụ Magnesium L-threonate?
2.How na Magnesium L-threonate na-arụ ọrụ?
3.Iri Magnesium L-threonate dị mma maka ụra?
4.Be iweghachi mmetụta Magnesium L-Threonate
5. Kedu uru ndị ọzọ magnesium L-threonate?
6.Ole nke Magnesium L-threonate ka m kwesịrị ị ?ụ?
7. Kedu nri ndị dị elu na Magnesium L-threonate?
8.Buy Magnesium L-threonate dị n'ịntanetị